Home » Lahatsoratra farany farany » Tourism » Ny politikan'ny fiaramanidina dia sekretera vaovao misahana ny fitaterana any Etazonia no tokony hanaraka
Sekreteran'ny fitaterana amerikana Buttigieg
Kenneth Quinn, talen'ny International Aviation Law PLLC ao amin'ny faritra Washington DC Metro, dia niresaka tamin'ny mpitarika indostrian'ny seranam-piaramanidina maromaro taorian'ny fanambarana fa i Pete Buttigieg dia sekretera fitaterana amerikana faha-19 izay nianiana tamin'ny 3 feb 2021.
Ny ben'ny tanàna tany South Bend, Indiana, ny ben'ny tanàna Pete Buttigieg dia notendrena ho sekretera an'ny Filoham-pirenena voafidy Joe Biden tamin'ny volana feb.
Ireo mpitarika ny seranam-piaramanidina dia efa nifanakalo hevitra momba ny zavatra antenain'izy ireo hotendrena - ary - tokony hifantohana.
Nandritra ny herintaona mahery nisian'ny COVID-19 tamin'ny tantaran'ny tsirairay, dia voan'ny coronavirus mafy ny fiaramanidina.
Tao amin'ny tontonana dia i Michael Whitaker izay niova ho mpisolovava tao amin'ny TWA ka tonga lohan'ny Alliances and International Affairs ao amin'ny United Airlines. Izy koa dia CEO an'ny orinasan-dia any India ary voatendry lefitry ny Administratera Federal Aviation Administration (FAA) eto Etazonia. Ary ankehitriny, tonga any Hyundai sy Air Mobility izy ary mitondra ny lohateny hoe Global Policy.
Manatevin-daharana ny dinika amin'ity koa CAPA - Ivotoerana fiaramanidina Hetsika dia i Sharon Pinkerton, izay filoha lefitra misahana ny raharaha mpanao lalàna sy lalàna mifehy ny A4A, biraon'ny kongresista sy lozisialy ao amin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina any Washington, DC Talohan'izay dia nitantana ny Politika sy ny Fandaminana Iraisam-pirenena tao amin'ny US FAA izy, mpiasa zokiolona ao amin'ny Komitin'ny tranon'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa miaraka amin'ny kongresista Mica avy any Florida.
Namelabelatra ny tontolon-kevitra dia i Sara Nelson izay filoham-pirenena iraisam-pirenen'ny Fikambanan'ny mpikarakara ny sidina-CWA izay efa naharitra efa-taona faharoa. Saraha dia marary COVID vao sitrana.
Ka jereo, manana fotoana tsy manam-paharoa fotsiny isika amin'ny ny indostrian'ny fiaramanidina eto amin'izao tontolo izao. Ary, Sara, misolo tena ireo mpikarakara sidina 50,000 XNUMX na mahery ianao, maro amin'izy ireo no tsy miasa, antenaina fa misy karama miaraka amin'ny fanohanan'ny Kongresy. Fa lazao anay ny ataon'ireo mpanamory fiaramanidina eo amin'ny sehatry ny seranam-piaramanidina amin'izao fijerinao izao sy ny fomba hiverenantsika amin'izao fotoan-tsarotra izao.
Eny, voalohany indrindra, Ken, misaotra anao nahalala ny olona teo amin'ny laharana voalohany. Ary mifantoka amin'izany foana aho isan'andro. Eo an-tsoroko misy ny sarin'i Paul Frischkorn, izay sakaizako, izay mpanampy amin'ny sidina hatry ny ela ihany koa ary izay voalohany maty tamin'ny virus coronavirus. Ka io dia teo amin'ny sehatry ny toeram-piasantsika no mety lava kokoa noho ny olon-drehetra noho ny toetran'ny asantsika. Ary ny virus tokoa no olana. Ny virus dia izay tokony hofoanantsika sy hofehezina. Tokony hifantoka amin'izany isika ary tsy maintsy manao zavatra izay tsy kosmetika fotsiny rehefa manao izany, fa raha ny marina dia manao ezaka mifototra amin'ny siansa hamoaka izany amin'ny vondrom-piarahamonintsika sy amin'ny toerana fivezivezena ataontsika.
Ary izany dia manomboka amin'ny fahazoana antoka fa ny olon-drehetra dia afaka mahazo vaksininy ary manohy manao ny sosona fiarovana izay ataontsika amin'ny fiaramanidina, mba hahafahantsika mametra ny loza mety hihanaka. Saingy tena fotoam-pitsapana ho an'ireo mpikarakara ny sidina satria, mazava ho azy, ny krizy ara-pahasalamana, izany no krizy ara-pahasalamana lehibe indrindra natrehinay tao anatin'ny 100 taona lasa izay koa no krizy ara-bola lehibe indrindra amin'ny fiaramanidina hatrizay. Ary raha mandray ireo krizy teo aloha teo amin'ny sehatry ny seranam-piaramanidina ianao, ny fiatraikany ara-toekarena, ary nampifanaraka azy ireo, dia tsy nanakaiky akory ny fiantraikan'ity areti-mandringana ity.
Mbola eo afovoany ihany isika. Na dia tena faly aza izahay fa manana fitantanan-draharaha izay mikasa ny hamongorana azy izao. Ary koa fa nanana ny sain'ny Kongresy hanome fanampiana ny karama izahay. Nanana fikorontanana izahay ny volana oktobra ka hatramin'ny desambra, fa miasa kosa izahay mba hahazoana antoka fa rehefa tapitra ny fandaharana amin'ny 31 martsa dia tena manana fanitarana izahay hamakivakiana ireo sisa amin'ny fizotran'ity vaksiny ity sy amin'ny lafiny ilan'ny valanaretina.
Page 1 ny 10 Prev Manaraka